"ဒါကဖုတ်ကောင်လား?" - နာမည်ကျော် ကာတွန်း - ပြော နာမည်ကြီး အရာ
နာမည်ကျော် ကာတွန်း ပြော မှုအရာတို့ကို, ပုံပြင်များ, ပုံများ, နောက်ခံပုံများ
အားလုံး ကောင်းသောရုပ်ရှင် ဂိမ်း
Entertainment က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
"ဒီဟာကဖုတ်ကောင်လား?" ဆိုတဲ့ဝတ္ထုရေးဆရာ Kimura ရဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပြီး Illustrator က Xiaowuyi နဲ့ Mengliyi တို့ကတာဝန်ရှိသည်။ Fuji ကစာကြည့်တိုက်ရဲ့အလင်းဝတ္ထုကိုတွေ့သည်။ သာမန်အထက်တန်းကျောင်းသား Xiang Chuanbu သည်နားမလည်နိုင်လောက်အောင်အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လူသတ်မှုဆိုင်ရာအမှုတွင်အသတ်ခံခဲ့ရသော်လည်းသူ သေဆုံး၍ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ အဖြစ်အပျက်မတိုင်မီမတော်တဆထိမိလဲခဲ့သူ necromancer "အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့" သူ့ကိုဖုတ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့သည်။ မှော်လောကမှစစ်သည် Chunnai နှင့်အခြားသွေးစုပ်သော Ninja မိန်းကလေး Sera တို့နှင့်အတူသူတို့သည်သူတို့နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည့်အခြေအနေသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Aikawa သည်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်ပြီးဝတ်စားဆင်ယင်သောမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးသူသည်လူသားတစ် ဦး ဖြစ်ချိန်တွင်သူသည်နားမလည်နိုင်လောက်အောင်နားမလည်နိုင်သည့်အကြောင်းတရားများကြောင့်တုန်လှုပ်နေသောလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလူသတ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သော်လည်း Necromancer မှဖုတ်ကောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Chunnai မှော်မိန်းကလေးမှော်အတတ်ကိုခံယူပြီးနောက်သူသည် ၀ တ်စုံမိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်ဖိအားပေးခံရသည်။ နေကိုအလွန်ကြောက်ပြီးနေမကြာခင်မှာပဲသွေ့ခြောက်သောအလောင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။
Seraphim သည်သွေးစုပ်ယူသည့်နင်ဂျာများဖြစ်ပြီးသွေးကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့်လူငယ်နှင့်ခွန်အားကိုရရှိနိုင်သည်။ ခေါင်းဆောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်အမွေဆက်ခံခြင်းပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ခေါင်းဆောင်အားသေဆုံးပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်အမွေဆက်ခံခြင်းပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ခေါင်းဆောင်အားရှင်ပြန်ထမြောက်စေရန်အားထုတ်ခဲ့သည်။ သူမလိုချင်သောကြောင့် Sera သည်ကောင်းမွန်သောအစေခံတစ် ဦး ဖြစ်ရန်၊ အိမ်သို့လှမ်း။ နေရန်၊ စိတ်ပြောင်းရန်အကောင်းဆုံးကိုစောင့်စားရန်နှင့်သူမကိုလုပ်ကြံရန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများနှင့်အခြားလုပ်ကြံသူများ၏ထိခိုက်မှုမှကာကွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာ, feat နှင့်အကျိုးစီးပွားလျှို့ဝှက်ဓားဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျကိုက်ယူနေသမျှကာလပတ်လုံး, ဖုတ်ကောင်ပင်အနားယူလို့မရပါဘူး။
Chunnai သည် Wiliya Matrez ၏မှော်အတတ်ကျောင်း၏ကျောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူမသည်အရာရာကိုလွယ်ကူစွာရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊ ပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်း၊ ကျောင်းသို့မတက်နိုင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အခြားသူများကရိန်းရဲ့အဆုံးမှာကျောင်းသားများဖြစ်လာသည်။ အားလပ်ရက်ရက်အရေအတွက်အလွန်များလွန်းသောကြောင့်အတန်းဆရာကသူမသည် Megaluo အမဲလိုက်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲခရက်ဒစ်များရနိုင်သောကြောင့်မိသားစုနေထိုင်ရာကမ္ဘာသို့ရောက်ခဲ့သည်။ Megalo နှင့်တိုက်ခိုက်ရန် Chainsaw-type မှော်လက်နက် Mistin ကိုအသုံးပြုပါ။ Aikawa Step ကိုတွေ့ပြီးနောက်သူသည်မှော်စွမ်းအားအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးမူလကမ္ဘာသို့မပြန်နိုင်တော့ဘဲမှော်ဝတ်စုံမိန်းကလေးအဖြစ် ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့်သူသည်မိမိကိုယ်ကို Megalo နှင့်ဆက်ဆံရန်မှော်ဘီဝတ်စုံမိန်းကလေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ပြီး၊ အဆိုပါမှော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်။
15 က high- resolution ကို ပုံ တစ်ဦးက စုစုပေါင်း:
ယခင် အစုံ: အဆောက်အ ဦး ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစည်းရုံးခြင်း
နောက်တစ်နေ့ အုပ်စုတစ်စု: "သာယာသောဆိတ်နှင့် Big Big Wolf"
•"သာယာသောဆိတ်နှင့် Big Big Wolf"
•" Slam Dunk "
•ချစ်စရာ မင်္ဂလာပါ Kitty ( မင်္ဂလာပါ Kitty )